Vaovao & tantara nasongadina
TED: Tanàna mpanjono vitsivitsy no niteraka revolisiona momba ny fiarovana an-dranomasina
Mandeha nomerika: fanangonana angon-drakitra momba ny jono horita amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso finday
Fiaraha-miasa vaovao hampihenana ny trawling ambany sy hanarenana ny jono amoron-tsiraka
Vaovao farany sy tantaranay
Fanambarana iraisan'ny mpanao gazety: Nanolo-tena hampihena ny trawl ambany manimba i Thailand amin'ny fihaonamben'ny UN Ocean Ocean
Royal Thai Government announces moratorium on new commercial fishing licences for bottom trawlers Blue Ventures and the Environmental Justice Foundation welcome the Royal Thai Government’s announcement today to...
Ny vondrom-piarahamonina Kenyana dia nanandrana 'fampindramam-bola manga' mifandraika amin'ny fiarovana an-dranomasina
Last year, communities in Kenya’s Kwale County approached our partner COMRED to ask how they could increase local participation in conservation efforts to manage coastal fisheries. Kwale’s coast stretches...
Ireo mpanjono madinika avy amin'ny kaontinanta dimy dia nanao antso ho an'ny hetsika maneran-tany mba hahazoana antoka fa ho ren'ny mpanapa-kevitra ao amin'ny UNOC ny feony. Mangataka amin’ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra eran-tany izy ireo...
Ny ho avin'ny ranomasimbe Afrikana dia eo am-pelatanan'ireo mpitarika ny fikajiana manerana ny kaontinanta. Izay no vina nasondrotra tamin’ny fihaonana mivantana voalohany nataon’ny tantsambo 17...
Ny fiaraha-miasa amin'ny vehivavy mpanjono ao Kaomoro dia mahafa-po satria hitanao fa mandroso sy mamorona lanja bebe kokoa avy amin'ny jono izy ireo. Ny Fikambanana Maecha Bora, ahitana vehivavy mpanjono avy amin’ny fokontany telo ao...
Jona 14, 2022
Tohina sy malahelo izahay noho ny vaovao momba ny famonoana feno habibiana an’i Henri Rakotoarisoa, 70 taona, filohan’ny fikambanan’ny vondrom-piarahamonina manampy amin’ny fiarovana ny ala mando eto Madagasikara.
Jona 10, 2022
Nasehon'i Antonio tamiko tokoa ny maha-zava-dehibe ny fanomezana ny mpanjono ny fahaiza-manao mba hiarovana ny tenany sy ny mpikambana hafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina, ary ny fomba nanentanana ny fandraisana anjara sy ny fiarovana bebe kokoa izany...
Ny rivodoza tropikaly Gombe dia namely ny faritra avaratr'i Mozambika tamin'ny volana martsa, namoizana ain'olona am-polony ary olona efa ho antsasa-tapitrisa no tra-boina manerana ny firenena.
Firenena 79 no manolo-tena hametraka vondrom-piarahamonina ho fototry ny ezaka hiarovana ny planeta manga misy antsika
Amin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasamihafàna biolojika amin'ity taona ity, dia mankalaza ny hetsika vao haingana nataon'ny firenena am-polony izahay mba hanatsarana ny zo sy ny anjara asa lehibe ananan'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka sy...
RE: TV dia nanao sarimihetsika izay mirakitra ny paikadin'ny BV sy ny asa nandritra ny taona maro mba hifehezana ireo karazana liona mena manafika any Belize.
Ny fikarohana vaovao dia manasongadina ny fanekena eo an-toerana ny tombontsoa ara-toekarena sy ara-tsosialy avy amin'ny fiompiana akoho amam-borona (CBA) maharitra any atsimon'i Madagasikara.
Vondrona maherin'ny roapolo miasa amin'ny vahaolana amin'ny toetr'andro sy ny hamehana ara-tontolo iainana no isan'ireo 465 nahazo famatsiam-bola nomen'ny mpanao asa soa MacKensie Scott.
Ny zon'olombelona, ​​toy ny an'ny mpanjono madinika, dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny tanjona fiarovana eran-tany hiarovana ny 30% amin'ny tany sy ny ranomasimbe maneran-tany amin'ny taona 2030, hoy ireo mpiaro ny tontolo iainana.
“Mitombo ny isan'ny feo miantso ny hampitsaharana ilay voalaza fa 'teknika fanjonoana ratsy indrindra eran-tany', dia ny trawling ambany. Miantso ny...
Nahazo fanomezana be indrindra teo amin'ny tantarany ny Blue Ventures taorian'ny fanomezana avy amin'ny mpanao asa soa MacKenzie Scott.
Nanao dingana lehibe ho amin’ny fangaraharan’ny jono ny Governemanta Madagasikara tamin’ny famoahana ny lisitr’ireo sambo indostrialy nahazo alalana hanjono amin’ny fari-dranomasina.
Fikambanana maherin'ny 70 avy amin'ny firenena 30 no nanao sonia taratasy misokatra izay miantso ireo mpitondra eran'izao tontolo izao hametraka ny zon'olombelona ho eo anoloana sy ho ivon'ny tanjona fiarovana ny zavamananaina maneran-tany.
Ny fifanakalozam-pianaran'ny mpanjono Somalia sy Kenya dia mampiseho fomba fiasa efa voazaha toetra amin'ny fiarovana an-dranomasina tarihin'ny vondrom-piarahamonina
Ny Blue Ventures dia mankalaza ny fahombiazan'ny fifanakalozam-pianarana ho an'ny mpanjono any Somalia amin'ny Kenya, taorian'ny fandraisana ny solontenan'ny fikambanana sivily telo tany amin'ny morontsiraka atsimon'i Kenya mba hiresaka...
Febroary 1, 2022